China, 18 Feb 2014(Alldhooftinle.com)
Somaalidu Haddaney Qurbaha Ka Tashan, Ciyaalkoodu Sida Wiilkaa Wang Ayey Kelyahooda Ku Beddelan Doonaan Iphone.
Booliiska magaalada Chenzou ee dalka Shiinaha ayaa soo qabtay shan qof oo lagu eedeeyey inay ka danbeeyeen in Mr. Wang oo 17 jir ah kellidiisii ku bedesho Iphone i iyo Ipad. Shantan qof oo isugu jira dhaqtar qaliin,kalkaaliye iyo dilaaliin ka baayac mushtara xubnaha bani aadmiga ayaa sugaya dhegeysiga dacwadooda.
Hooyada dhashay wiilkan ayaa sheegtay inuu wiilkeedu aad u jeclaa Ipadka laakiin dhaqaale xumo darteed ay awoodi weydey inay u iibiso, weligayna kuma fekerin in wiilkaygu jidhkiisa furfuran doono si uu u helo Ipad. Waxay intaa ku dartay in aanay arkin mudo 3 maalmood ah aanayna ka shakiyin waayo saaxiibo badan ayuu lahaa. Maalintii u cisbitaalka ka soo baxay ayaan ku arkay Ipad iyo Iphone, suaalo badan ka dibna wuxuu ii sheegey inuu kelyahiisii mid ka mid ah ku bedeshay. Markii aan rumaysan waayey ayuu i tusay qaliinkii lagu sameeyey.
Hooyadan oo aad u murugaysan ayaa sheegtay in aanay ka hari doonin dadkii ka danbeeyey arintan. Wiilka kelyihiisa dhaafsaday Ipadka ayaa hada yaala cisbitaal sababtuna ay tahay iyadoo infection uu qaaday markii qaliinka lagu samaynayey, waxaana aad u liitey qalabka iyo dawooyinka loo isticmaalay qaliinkiisa.
Dhinaca kale xeer ilaaliyaha dacwadan ayaa sheegay in ninka arintan ka danbeeyey uu yahay dilaalka ugu weyn xaga iibinta xubnaha bani aadmiga oo la yiraahdo He Wei, wuxuuna ku iibiyey kellidii 35000 doolar, halka uu wiilka yarna ka siiyey 3500 una dhiganta 10%. Dalka Shiinaha waxaa sugaya in xubnaha jidhka loo bedelo in ka badan hal milyan iyo badh qof, taasina waxay keentay in suuq madow lagu kala iibsado xubnaha jidhka Bani Aadmiga.
Garaad Axmed AlMakhzuumi